အကောင်းဆုံး CAT Din နျ Standard CAT CAT တရုတ်နိုင်ငံတွင်လုံးဆက်စပ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ Pull, လုံး Pull, လက်ကား CAT လုံး Pull, လုံး Pull
Home > ထုတ်ကုန်များ > လုံး pullCAT ဆွဲထုတ်လုံး
CAT ဆွဲထုတ်လုံး ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, CAT ဆွဲထုတ်လုံး, လက်ကား CAT ဆွဲထုတ်လုံး ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, စံ CAT ဆွဲထုတ်လုံး Din R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
CNC စက် CAT BT retention knobs ဆွဲထုတ်လုံး
CNC စက် CAT retention knobs ဆွဲထုတ်လုံး
အရည်အသွေးမြင့်မား CAT30 ဆွဲထုတ်လုံး
မြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှုကို CAT လုံးတိကျစွာကြိတ်ဆွဲ
ယူအက်စ်အေစံ ANSI B5.50 CAT ဆွဲထုတ်လုံး
CNC စက် CAT BT retention knobs ဆွဲထုတ်လုံး CNC စက် CAT BT ၏ 1. အုပ်စုများအသက် 30 retention knobs ဆွဲထုတ်လုံး: B ကအမျိုးအစား (carburizing နှင့်အအေးဘုံဆွဲလုံး) တစ်ဦးကအမျိုးအစား (carburizing နှင့်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်ဆွဲလုံးနျအအေး) AA ကိုအမျိုးအစား (အရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းအပြိုင်အဆိုင်ဆွဲလုံး) 2. သှား: အနက်ရောင်သွား,...
CNC စက် CAT retention knobs ဆွဲထုတ်လုံး CNC စက် CAT BT ၏ 1. အုပ်စုများအသက် 30 retention knobs ဆွဲထုတ်လုံး: B ကအမျိုးအစား (carburizing နှင့်အအေးဘုံဆွဲလုံး) တစ်ဦးကအမျိုးအစား (carburizing နှင့်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်ဆွဲလုံးနျအအေး) AA ကိုအမျိုးအစား (အရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းအပြိုင်အဆိုင်ဆွဲလုံး) 2. သှား: အနက်ရောင်သွား,...
ယူအက်စ်အေစံ ANSI B5.50 CAT ဆွဲထုတ်လုံး JT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ DIN69872-1988 JT အပေါ်အကျင့်ကိုကျင့်အသေးစားအရည်အသွေးကိုမသာ၏လုံး .Pull လုံးစက်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလျော့ကျ Pull, သူတို့ကပင်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအန္တရာယ်ရှိပါတယ်။...
မြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှုကို CAT လုံးတိကျစွာကြိတ်ဆွဲ JT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ DIN69872-1988 JT အပေါ်အကျင့်ကိုကျင့်အသေးစားအရည်အသွေးကိုမသာ၏လုံး .Pull လုံးစက်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလျော့ကျ Pull, သူတို့ကပင်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအန္တရာယ်ရှိပါတယ်။...
တရုတ်နိုင်ငံ CAT ဆွဲထုတ်လုံး ပေးသွင်း
အပူကုသမှုပြီးနောက် 1. , ပြီးတော့ပြိုကွဲဖို့မလွယ်ကူပါဘူး, ထွက်ခက်လက်သည်းဆွဲထုတ်, tempering, သန့်ရှင်းရေး, အအေးခံ။
2. မျက်နှာပြင်ခိုင်မာသော, ဝတ်ဆင်; ပျော့အလယ်မှာလုံလောက်သောဆန့တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိရှိသည် ဖြစ်. , ဆွေမျိုး 45 # သံမဏိကျိုးဝတ်ဆင်ဖို့မကတိပေးဖို့ပိုလွယ်ကူစေရန်ဖြစ်ပါတယ်။
3. CAT conical shell ကိုရှုး Shanks: 30, 50, 40
4. သင့်လျော်ကြိတ်ရှုး: 13mm-50mm
5. Precision 0.01mm ချိန်ခွင်လျှာ 8000rpm ထက်လျော့နည်းသည်။ မြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှုကိုလည်းသင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီဖန်ဆင်းထားနိုင်ပါတယ်။ (g6.3 / 12000rpm, G2.5 / 20000) 48-55hrc ခိုင်မာသော။
အဆိုပါကြိတ်ရှုး disk ကိုအတူဆောင်းပါးတိုဆွဲဘို့သင့်လျော် 6. လည်းလိုအပ်ပါသည်။
လက်ကား CAT ဆွဲထုတ်လုံး
စံ CAT ဆွဲထုတ်လုံး Din
CAT လုံးဆက်စပ်ပစ္စည်း Pull